बैशाख १९, २०७८ ०८:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा उपचारका लागि बेड मात्रै होइन, स्वास्थ्यकर्मीको समेत अभाव हुन थालेको छ । देशका विभिन्न अस्पतालहरुले संक्रमितको चापको तुलनामा स्वास्थ्यकर्मी कम हुँदा उपचारमा कठिनाइ झेल्नु परिरहेको छ ।
पहिलेदेखि नै स्वास्थ्यकर्मी कम भएका तथा कतै उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुन थालेपछि उपचारमा समस्या देखिएको हो ।
भेरी अस्पतालमा अधिकांस स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित
बाँकेस्थित भेरी अस्पताल जहाँ १४० वटा बेड छन् । त्यहाँ अहिले पनि २०० भन्दा बढी संक्रमित अस्पतालमा छन् । बेड अभावका कारण यस अस्पतालले अक्सिजन नचाहिने संक्रमितलाई भर्ना लिएको छैन । केही संक्रमितलाई आकस्मिक कक्ष बाहिर बेड राखेर भएपनि उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अस्पतालका कोभिड वार्ड नर्सिङ इन्चार्ज ईश्वरी केसीका अनुसार बिरामीलाई हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु नै संक्रमित हुन थालेपछि अस्पतालमा उपचारमा समस्या भएको छ । अस्पतालका आधा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् जसमा ३२ जना नर्स मात्रै छन् । ६२ जना अस्पतालका पुरानै नर्स र कोभिडका लागि थप ३९ नयाँ नर्स गरि १०१ जना नर्स कार्यरत छन् ।
२ हप्ताको बीचमा डाक्टर, नर्स, पारामेडिक्स, कार्यालय सहयोगी गरि ७५ जना संक्रमित भएका छन् । अरु धेरैलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एक जना नर्सले १५ जना बिरामीसम्म हेर्न परिरहेको बाध्यता सुनाउनुहन्छ इन्चार्ज केसी ।
एकदमै गाह्रो छ । एक जना स्वास्थ्यकर्मी बिरामीलाई हेर्न भित्र छिरेपछि ५ घण्टासम्म बाहिर निस्कन पाउनुहुन्न । आइसियुमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अझ धेरै सकस छ । आइसियुका बिरामीहरुको रगत परीक्षण,अक्सिजन नाप्ने लगायतका थप जाँचहरु गर्नुपर्ने भएकाले घण्टौं सम्म बाहिर निस्कन पाइदैन । केसीले भन्नुभयो,‘दोस्रो लहर सुरु भएपछि ह्वात्तै संक्रमित बढेपछि सुरुको हप्तामा स्वास्थ्यकर्मीहरुले खानासमेत खान पाउनु भएन ।’
अस्पतालले हालै मात्र मेडिकल अधिकृत १०, स्टाफ नर्स ४० सहित ६० जना जनशक्ति मागेको छ । उहाँहरु आउनुभएपछि उपचारमा केही सहज हुने आशा उहाँ गर्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी,सहयोगी तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई छुट्टै राखिएको छ । उहाँहरुलाई एक आपसमा संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै हेरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । संक्रमितको उपचारमा खटिनुभएकी केसीलाई पनि २ हप्ता अघि मात्रै संक्रमण भयो ।
अहिले उहाँ संक्रमितको उपचारमा नै हुनुहुन्छ । उहाँलाई लाग्छ, सबैको हेल्चक्रयाइका कारण यस्तो भयावह स्थिति आयो । पहिलो लहरमा मानिसहरु निकै डराउथे तर अहिले मानिसमा कोरोनाप्रति डर नभएको महसुस उहाँले गर्नुभएको छ ।
पहिला संक्रमितको उमेर समूह ५० वर्षभन्दा माथि हुन्थे भने अहिले ३०/४० वर्षका धेरै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वीरमा एक नर्सले २८ जना संक्रमित सम्म हेर्नपर्ने बाध्यता
जनशक्तिको चरम अभाव वीर अस्पतालले पनि झेलिरहेको छ । वीर अस्पतालमा अहिले एक जना नर्सले २८ जनासम्म संक्रमित हेर्नपरिरहेको छ । २८ बेडको आइसोलेसन वार्डको लागि ८ जना स्टाफ नर्स रहेको कोभिड युनिट सुशिला श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
आइसोलेसन वार्डमा लक्षण भएका संक्रमितहरु भर्ना भएकाले वार्डमा नर्सको कमी भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । बिरामीको चापलाई अहिले भएको जनशक्तिले थेग्नै नसक्ने स्थिति आएकाले आफुहरुले नर्सको संख्या माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोभिडका बिरामी हेर्न छुट्टै नर्स छैनन्
यसैगरी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । ७०० भन्दा बढी नर्स रहेको यस अस्पतालमा कोभिडका बिरामी हेर्न छुट्टै नर्स खटाइएको छैन । अस्पतालका नर्सिङ डाइरेक्टर कविता देवकोटाले भैपरि आउदा जो कोही नर्सले जो कोही बिरामी हेर्नपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
शनिवारसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १४५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको थियो । जसमध्ये १५ जना आइसियु र ५ जना भेन्टिलेटरमा थिए । अस्पतालको बेड क्षमता भने १२९ रहेको छ ।
ढोकैमा बेड कुरेर बस्छन् संक्रमितहरु
संक्रमितहरु बेड नपाएर रातभर अस्पतालको ढोकैमा बेड कुरेर बस्ने गरेका छन् । अस्पताल पुग्ने अधिकांश संक्रमितको मुखमा अक्सिजनको पाइप जोडिएको हुन्छ, उनीहरु अक्सिजन लगाइदेऊ भन्दै अस्पताल आउने गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत अर्की नर्सले जानकारी दिनुभयो । फोक्सोमा गम्भिर असर पुरयाइसकेको र अक्सिजनको मात्रा एकदमै तल झरिसकेको अवस्थामा संक्रमित अस्पताल पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संक्रमित बढेको बढेई गर्दा बेडको मात्रै नभई उपचारमा नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीको कमी हुन थालेको छ । उपचारमा कठिनाई हुन थालेपछि अस्पतालले थप ९० जना नर्स माग भइसकेको छ ।
दोस्रो लहर सुरु भएयता शिक्षण अस्पतालका १५ जना नर्स संक्रमित भइसकेका छन् । अहिले यस अस्पतालमा एचडीयु वार्डमा २ जना बिरामीलाई एक नर्स, आइसियु वार्डमा एक संक्रमित,एक नर्स छुट्याइएको छ भने आइसोलेसन वार्डमा एक नर्सले ५ जनासम्म हेर्ने गरि कार्य तालिका मिलाइएको देवकोटाले बताउनुभयो ।
क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेको अवधिमा नर्सले कोभिड भत्ता पाउदैनन्
उपत्यकाको एक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक जना नर्सले आफुहरुले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बस्दाको अवधिको कोभिड भत्ता नपाएको दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो १२ घण्टा काम गरिरहनु परेको छ तर भत्ता हामीले ८ घण्टाको मात्रै पाएका छौ ।
यसैगरी अस्पतालले पहिलाको जस्तो क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगर्दा आफुहरुबाटै घरका अन्य सदस्यहरुलाई संक्रमण सार्न सक्ने त्रास आफुहरुमा रहेको ती नर्सले दुखेसो गर्नुभयो ।
सरकारी अस्पताहरुमा नर्सको अवस्था बिजोग, सरकारी नर्सिङ संघ
सरकारी नर्सिङ संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको तुलनामा नर्सहरु अत्यन्तै कम भएकाले अहिले नर्सहरुको अवस्था दयनिय रहेको दुखेसो गर्नुहुन्छ । उसै पनि सरकारी अस्पतालमा पहिला देखि नै कम नर्स छन् त्यसमा पनि संक्रमित थपिँदा झनै भार थपिएको छ । श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अहिले एक नर्सले २८ देखि ३५ जना संक्रमितलाई हेर्न पर्ने दयनिय अवस्था छ ।’
अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ
उहाँले सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि जनशक्तिमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नर्सहरुको आवश्यक धेरै हुने भएपनि जनशक्ति माग गर्दा नर्सको संख्या अत्यन्तै न्यून हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । कोभिडको वर्तमान अवस्थामा नर्सहरु फ्रन्टलाइनमा छन् तर जनशक्ति माग भएका स्थानमा नर्सको माग गरिदैन । हालै कर्णालीमा जनशक्ति माग गरियो तर नर्स मागिएन । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, के कर्णालीमा नर्स आवश्यक छैन ?
‘गुणस्तरीय सेवाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार आइसियुमा दुई जना बिरामी बराबर एक नर्स र वार्डमा ८ जना बिरामी बराबर एक नर्स हुनुपर्छ तर नेपालमा सामान्य अवस्थामा पनि मापदण्ड अनुसार नर्स छैनन्, ’श्रेष्ठले भन्नुभयो । अहिले सरकारी अस्पतालहरुमा करिव ७ हजार नर्स आवद्ध छन् ।
संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । शनिवार ५७ सय ६३ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संख्या नेपालमा कोरोना भित्रिएयताकै अत्याधिक हो ।
पहिलो लहरमा कार्तिक ५ गते २० हजार ११८ जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा ५७ सय ४३ जनालाई पोजेटिभ देखिएको थियो । अहिले दोस्रो लहरमा पीसीआर र एन्टीजेन गरि १४ हजार ९६९ जनाको कोरोना परीक्षण हुँदा ५७ सय ६३ लाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जति परीक्षण बढायो उति नै संक्रमित पत्ता लाग्न सक्छ ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका डा. पुरुषोत्तम बर्मा, जो आफै संक्रमित भएर पनि काम गर्दै ,तस्विर सामाजिक सञ्जालबाट
दिनानुदिन तिव्र गतिमा संक्रमित बढिरहँदा आफुसँग भएको संरचनाले अब धान्न नसक्ने भनेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भनिसकेको छ । संरचना मात्रै होइन अहिले जनशक्तिको अभाव देखिसकेको छ अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वयम् आफु सचेत नभए उपचार नपाएर मर्नपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले अनावश्यक घर बाहिर ननस्किन र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न विज्ञहरुले अपिल गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीको पनि अभाव